Akwụkwọ ozi ọhụrụ UNWTO degaara ndị otu ya: imebi ụkpụrụ omume
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ Ọchịchị » Akwụkwọ ozi ọhụrụ UNWTO degaara ndị otu ya: imebi ụkpụrụ omume
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • News • ndị mmadụ • Akụkọ na -agbasa na Spain • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • WTN
Onye odeakwụkwọ ukwu UNWTO Zurab Pololikashvili ka hụrụ onye nnọchi anya Mozambique na Madrid
Na nzaghachi na akụkọ sitere n'aka onye na-ahụ maka ụkpụrụ omume UNWTO na akwụkwọ ozi mepere emepe sitere n'aka ndị isi UNWTO mbụ, Zurab Pololikashvili ezipụla akwụkwọ ozi ngwa ngwa nye ndị otu UNWTO niile. Ọ kwadokwara ihe mgbakwunye iji dokwuo anya akụkọ HR na-atụgharị uche na okwu dị oke egwu nke UNWTO Ethics Officer.
O yiri ka ọ bụ mgbalị siri ike ịzọpụta ọnọdụ ya, ebe ọ na-ebo ndị ọrụ UNWTO mbụ dị elu ebubo ụgha.
Mkpa olile anya na-eduga n'omume enweghị olileanya maka odeakwụkwọ ukwu UNWTO Zurab Pololikashvili
Nke a bụ nke mbụ odeakwụkwọ ukwu UNWTO Zurab Pololikashvili zara ajụjụ ma ọ bụ zaa ajụjụ eTurboNews ederede.
Nzaghachi ya emeghị ka onye nchịkọta akụkọ nọ, kama ọ bụ mba ndị otu UNWTO niile. Akwụkwọ ozi ya na otu ezigara addendum na Fraịde, ụbọchị ole na ole tupu ntuli aka nzuzo na-arụrịta ụka nke e mere iji họrọ Pololikashvili maka okwu ọzọ dịka odeakwụkwọ ukwu UNWTO. A na-eme ntuli aka maka Disemba 3 n'oge Mgbakọ UNWTO na-abịa na Madrid.
Onye odeakwụkwọ ukwu nọ "na-agbalị ịkọwapụta" okwu ndị dị oke egwu nke UNWTO Ethics Officer kwuru na akụkọ ahụ na UNWTO General Assembly na akwụkwọ ozi mepere emepe nke ndị isi UNWTO bụbu ọkwa dị elu zitere banyere ndị ọrụ ụkpụrụ omume na-akọ banyere omenala nlekọta na omume na. UNWTO.
Ihe sochiri nke a bụ ụzọ Costa Rica mere iji rịọ vootu nzuzo maka nkwenye nkwenye UNWTO na-abịa maka nhọpụta onye odeakwụkwọ ukwu.
Zurab Pololikashvili na-eche n'ụzọ doro anya na ọ nọ n'egwu nke enweghị ike ijide oge nke abụọ ya dị ka odeakwụkwọ ukwu UNWTO.
Akụkọ na nso nso a:
Kedu ihe kpatara na ahọpụtaghị onye odeakwụkwọ ukwu UNWTO Zurab Polokashvili nke ọma…
Costa Rica Minister nke njem nlegharị anya Giant nzọụkwụ maka UNWTO ọhụrụ…
22 EE, 250 Mba: Zurab Pololikashvili maka UNWTO…
Ndị nnọchi anya na Madrid kpọrọ oku na UNWTO Bribery…
Mgbakọ UNWTO ugbu a na Madrid: Zurab…
UNWTO kwagara Saudi Arabia na ejidere: odeakwụkwọ ukwu…
Mgbe onye isi ala Saudi na onye isi ala Spen na-ekwu ya…
Ịkpọ asị UNWTO maka WTTC gụnyere ịhụnanya Tweeted…
N'akwụkwọ ozi ya, Pololikashvili na-ede na n'okpuru oge nke ndị nnọchiteanya UNWTO mbụ, e mere ihe na-ezighị ezi.
Agbanyeghị, n'ime akụkọ nyocha nke afọ nke ndị nyocha sitere na mba ndị otu UNWTO ka akọpụtabeghị mmebi iwu ọ bụla.
Ntụ aka ya na akwụkwọ ozi na nso nso a nye mba ndị otu bụ ebubo ụgha megide ndị isi na ndị ọrụ mbụ, yana ihe atụ nke otu Zurab si na-ebo ndị isi na ndị ọrụ mbụ ebubo site n'oge ọ malitere ọrụ.
Nke a mere ka ọnọdụ ọjọọ dị njọ na nzukọ ahụ wee malite omenala mmekpa ahụ na iyi egwu nke ọtụtụ ndị ọrụ ọma (bụbu) ndị ọrụ.
Ịmepụta nrụrụ aka na aghụghọ
Ebe ọ bụ na Zurab Pololikashvili weghaara ọkwa, UNWTO na-eme ọtụtụ mbọ iji wepụta nrụrụ aka na nrụrụ aka, na-eme ka a na-agbaso usoro niile dị n'ime ya nke ọma, dịka usoro nnabata na ịzụ ahịa. Agbanyeghị, n'eziokwu, Pololikashvili ji n'aka na kọmitii mbanye na ịzụrụ ihe na UNWTO bụ naanị ezigbo ndị enyi ya bụ ndị ga-eme mkpebi ọ bụla ọ chọrọ.
Ịmepụta ọnọdụ nleba anya n'ime site n'ịhọpụta onye na-ahụ maka ụkpụrụ omume n'ime ka emebere nke ọma ka ọ nwee ike ịchịkwa mkpesa ndị ọrụ na-eme.
Emebekwara ya iji mee ka ụjọ jide ndị ọrụ chọrọ ịkọ akụkọ.
N'okpuru njikwa gara aga, a na-enwebu onye na-ahụ maka ụkpụrụ omume na mpụga nke nwere ọnọdụ nnọpụiche na nnwere onwe.
N'ime ọnwa mbụ n'ọchịchị, Pololikashvili gbanwere usoro ahụ ka ọ bụrụ ọnọdụ ụkpụrụ omume dị n'ime.
O chere na site n'aka onye na-ahụ maka ụkpụrụ omume n'ime, ọ ga-adị mfe iji nrụgide wepụ mkpesa mgbe ọ dị mkpa.
Egwu site na akụkọ nke onye ọrụ ụkpụrụ omume na akwụkwọ ozi mepere emepe sitere n'aka ndị isi UNWTO mbụ bụ Pololikashvili ngwa ngwa zigara akwụkwọ ozi na mba UNWTO niile wee kwadebe ihe mgbakwunye na akụkọ HR na-atụgharị uche n'okwu dị oke egwu nke UNWTO Ethics Officer.
N'ịgbalị ịchebe ọkwa ya, ọ gbakwụnyere ebubo ụgha na ndị isi UNWTO bụbu ọkwa dị elu.
Akwụkwọ ozi nke odeakwụkwọ ukwu na mgbakwunye na enwetala nnukwu ihe ijuanya site n'aka ndị ozi njem nlegharị anya na mba ndị otu UNWTO.
Tupu ebipụta akwụkwọ ozi ahụ, eTurboNews natara nzaghachi site n'aka ndị ozi na ndị isi ndị isi na mpaghara njem nlegharị anya, na-ekwupụta nchegbu na ihere nke mmeghachi omume Pololikashvili.
Ọ bụ ihe ihere na Pololikashvili na-ebo ndị ọrụ UNWTO mbụ dị elu ebubo, gụnyere ndị odeakwụkwọ ukwu abụọ gara aga na-emebi ụkpụrụ omume maka ndị ọrụ obodo mba ụwa mgbe ha na-ebute nchegbu siri ike banyere omenala nlekọta na omume n'ime UNWTO.
O chere na anabataghị nkatọ na UN?
N'echiche Polokashvili, iguzosi ike n'ihe yiri ka ọ na-ewepụ nkatọ. Ọ bụ kpọmkwem àgwà a na usoro nlekọta a na-atụ egwu na-emegide ụkpụrụ UN ọ bụla.
Zurab Pololikashvili kwadebere akwụkwọ ozi a na mgbakwunye na akụkọ HR, ma ihe mgbakwunye ahụ jupụtara na ozi gbasara ọnọdụ ego n'ime afọ iri gara aga.
O nyeghị obi abụọ ọ bụla na nchegbu nke onye ọrụ ụkpụrụ omume welitere. N'ezie, ụdị nzaghachi a gosipụtara n'ụzọ doro anya ihe mere onye ọrụ ụkpụrụ omume ji kwuo okwu mkparị ya na ndị isi ọkwa mbụ kpebiri izipu akwụkwọ ozi ha mepere emepe.
Pololikashvili na-anata otuto maka ịtụgharị akwụkwọ nguzozi UNWTO site na adịghị mma ka ọ bụrụ nke ziri ezi. Otú ọ dị, ọ hapụrụ eziokwu ahụ bụ na Saudi Arabia kwụrụ UNWTO 5 Nde dollar maka ịmepụta ebe UNWTO mpaghara na Riyadh. Nke a nde dollar 5 bụ mgbakwunye na ọnụ ahịa na ọrụ nke etiti ahụ.
Eziokwu ahụ bụ na onye na-ahụ maka ụkpụrụ omume na-agụnye okwu dị egwu na okwu mkparị dị otú ahụ na akụkọ a na-aga n'ihu na Nzukọ Nzukọ Alaeze nakwa na ọtụtụ ndị bụbu ndị ọrụ UNWTO dị elu na-ebute ụzọ wee dee akwụkwọ ozi mepere emepe degara mba ndị otu na-egosi n'ụzọ doro anya na ọ nwere ihe dị njọ na ya. UNWTO.
Okwu Pololikashvili kwuru na ndị bụbu ndị ọrụ UNWTO na-emetụta ịdị n'otu na ịdị n'otu nke UNWTO bụ ihe nzuzu. N'ịmara na ya n'onwe ya kemgbe ọ malitere ọchịchị na-ahụ maka ịdị n'otu na ịdị n'otu nke Òtù Na-ahụ Maka ọtụtụ esemokwu na esemokwu ọ malitere.
Ọ dị mkpa ka e too onye ọrụ ụkpụrụ omume na onye bụbu ndị ọrụ UNWTO maka ime ihe ahụ kpughere Zurab.
Ị pụghị ịghọta nke ọma nkọwa ọ na-agbalị inye n'akwụkwọ ozi o degaara mba ndị so na nso nso a.
Naanị ị na-agụ mkpọtụ, ebubo ụgha, na ụfọdụ mkpu, mmeghachi omume na-adịghị mma maka odeakwụkwọ ukwu nke otu UN Agency.
Ntinye aka UNWTO na Usoro ntuli aka na-abịa
Ọ bụ ezie na obi abụọ banyere nkwenye nke oge nke abụọ nke Pololikashvili dị ka odeakwụkwọ ukwu UNWTO na-ewuli elu, eTurboNews mụtara na ụfọdụ ndị ọrụ UNWTO na-arụkọ ọrụ ọnụ na Pololikashvili iji kpọtụrụ mba ndị otu. Ha na-agbalị itinye nrụgide na ndị nnọchiteanya ma ọ bụ mee nkwekọrịta iji nweta votu maka ịkwado Pololikashvili ọzọ.
Ọ bụrụ na ihe ọ bụla megidere ụkpụrụ omume maka ndị ọrụ obodo mba ụwa, ọ bụ nnyonye anya a na usoro ntuli aka UN a. Ndị ọrụ UNWTO kwesịrị ịdị na-ele mmadụ anya n'ihu mgbe niile, ọkachasị ma a bịa na ntuli aka.
Ekwupụtakwara nchegbu na Pololikashvili na-agbasi mbọ ike iji kwado nkwekọrịta na mba ndị otu na-enweghị ike iziga ndị nnọchiteanya na Mgbakọ General na Madrid ga-ekwe ka ndị òtù ndị ọzọ nọ nso Pololikashvili nwee ike ịme ntuli aka n'aha ha.
Izu abụọ na-abịanụ ga-adị oke mkpa maka ọdịnihu UNWTO yana ntụzịaka a chọrọ nke nzukọ a kwesịrị inye usoro mgbake njem nlegharị anya ụwa.
Ọ dị mkpa ka ndị otu mba nọrọ na nche ma mara nke ọma maka mkpebi ndị a ga-eme na usoro ịtụ vootu na-aga n'ihu na Mgbakọ Ọgbakọ na-abịa. Nke a bụ naanị ụzọ a ga-esi hụ na Nzukọ Ezumezu ga-amalite usoro iji wughachi UNWTO siri ike.
Nke a ga-abụ maka ọdịmma mba ndị otu UNWTO niile na ọtụtụ ụlọ ọrụ, ndị ọchụnta ego, na ndị ọrụ na-arụkọ ọrụ na UNWTO na ngalaba njem na njem nlegharị anya.
Onye odeakwụkwọ ukwu UNWTO kwesịkwara ijere mba niile ozi, ọ bụghị naanị ndị odeakwụkwọ ukwu tụkwasịrị obi ka a ga-ahọpụta ya ọzọ.
Okwu ndị ozi kwuru:
Enweghi ike na enweghi nkwado nkwado dị mma n'aha ụlọ ọrụ ahụ n'oge kacha sie ike na akụkọ ihe mere eme anyị. Zurab abụrụla onye na-akwụ ụgwọ ma na-akparị ndị mmadụ n'otu n'otu na ndị otu ọ chere na ha anaghị akwado atumatu na mmemme ya na usoro a na-ekewapụ ndị mmekọ ogologo oge wee si otú a na-ebelata UNWTO. Ọ bụ onye na-adịghị ekwu okwu n'ọnụ na ọbụna na-adịghị ike! UNWTO kwesịrị ka mma !!
Akwụkwọ ozi ya kwadoro echiche ya banyere ụlọ ọrụ mechiri emechi nke a na-apụghị ịchịkwa n'èzí. A tụrụ anya na ọ ga-emeghachi omume.
Enweghị aha ọ bụla n'akwụkwọ ozi ya gbasara akụkọ nke onye ọrụ ụkpụrụ omume bụ nke kachasị ihe akwụkwọ ozi ahụ mepere emepe na-ezo aka na nke bụ akwụkwọ ọha na eze. Enweghị ezi ihe kpatara o ji debe ụbọchị maka ndị isi oche na Jenụwarị mgbe FITUR bufere site na Jenụwarị ruo Mee.
Ọ maara nke ọma maka ogo ngbanwe nke e mere naanị iji tinye ya maka nkwenye ya.
Akwụkwọ ozi ya bụ ihe egwu nye ndị nkatọ na mba ndị ọzọ na-achọ ịgba ya aka.
Ọ bụ ọdachi na ọdịda!
Ọ na-eji ikpo okwu a akwado onwe ya ịbụ praịm minista obodo ya, Georgia.
Gịnị mere o ji họpụta CFO si Georgia, na-emetụta kpọmkwem ihe gbasara ego nke UNWTO site n'iweta onye si obodo ya?
Ọ na-aga n’obere ógbè na-agbalị inye ha akara ngosi ihu ọma ma ọ bụ nye ha ihe iri ngo ka ha nwee ike ịtụ ya vootu.
N'oge a, a ga-ewepụrịrị ya ma ọ bụghị na ọtụtụ mba ndị otu ga-enweta nkwekọrịta nke ọma maka mpaghara ha.
Enwere ike ịnwe mwepụ nke ndị otu siri ike. UNWTO nwere ike bụrụ ụlọ ọrụ UN ọzọ na-adịghị arụ ọrụ na nke na-abaghị uru, ma ọ bụrụ na akwadoro ya wee gaa n'ihu.
Akwụkwọ ozi Zurab Pololikashvili zoro aka na akụkọ a:
Madrid, Nọvemba 19, 2021
Enwere m olileanya na nzikọrịta ozi m ga-ahụ gị nke ọma. Enwere m ihe ùgwù ịgwa gị okwu iji gwa gị na ọ na-ewute m nke ukwuu na nzikọrịta ozi nke ndị ọrụ UNWTO mbụ mere n'oge na-adịbeghị anya bipụtara na ụfọdụ mgbasa ozi. N'oge mpaghara njem nlegharị anya niile na-agbasi mbọ ike na nsonaazụ na-emebi emebi nke ọrịa na-efe efe na World Tourism Organisation na-akpọ maka ịdị n'otu na ịdị n'otu, ọtụtụ ebubo na-enweghị isi nke ndị ọrụ UNWTO bụbu ndị ọrụ na-akpaghasị ọrụ ya mgbe niile.
N'ụzọ dị mwute, akwụkwọ ndị a sitere na akwụkwọ ozi ọha na eze na youtube.com na-emebi nghọta na ntụkwasị obi nke Òtù ahụ, nke na-arụsi ọrụ ike ugbu a na nkwadebe nke Mgbakọ Mgbakọ na-abịanụ na Madrid. Ha na-emetụtakwa ndị otu UNWTO chọrọ ịhụ ka nzukọ a siri ike na ịdị n'otu, ma na-ajụ ajụjụ maka izi ezi nke usoro mkpebi nke ndị otu na-achị isi ya. Nke a bụ ihe mere na enweghị m ike ịgbachi nkịtị ọzọ wee chee na m kwesịrị ịzaghachi.
Na-emebi ụkpụrụ omume nke ọrụ obodo mba ụwa
Ebubo ndị ọrụ UNWTO mbụ boro bụ ihe na-akụda mmụọ ma na-atụ egwu, ọkachasị, na-eburu n'uche na, ebe ha jerela ozi maka nzukọ ahụ ruo ọtụtụ afọ, ha, karịa onye ọ bụla, kwesịrị ichebe ma chebe onyonyo na iguzosi ike n'ezi ihe ya. Na nhazi nke mmekorita ya na UNWTO, onye ọ bụla na-arụ ọrụ, gụnyere mụ onwe m, kwere nkwa na ọ gaghị etinye aka n'ụzọ na-ezighị ezi na ihe omume nke Òtù Na-achị Isi na nke Òtù Na-achị Isi n'oge ọrụ ya na mgbe njedebe nke mmekọrịta ọrụ. N'ụzọ dị mwute, na-ewu-elu anyị General Assembly a mebiri nkwa a, ọ bụghị nanị otu ugboro, ma ọtụtụ oge. A na m akwa ụta na mwakpo ndị dị otú ahụ abụghị ihe ọzọ karịa mbọ a na-adịgide adịgide iji megharịa na igbochi usoro ime mkpebi nke Òtù ahụ, dị ka e hiwere na Iwu ya. Ọ bụ ihe na-akpasu iwe karịa mgbe n'oge ndị nnọchi anya UNWTO mbụ, ndị debanyere akwụkwọ ozi mepere emepe, emejọrọ na ọtụtụ mba ndị dị mkpa wepụrụ, ọnọdụ nke nzukọ a na-agbalị imezi kemgbe ahụ.
Na-eleghara ọbụbụeze nke Òtù Na-achị Isi anya
Usoro nhoputa ndi ochichi na nhazi oge maka nhọpụta nke Council Executive nke onye ndoro-ndoro ochichi nke a ga-ebuga n'ogbako ogbako dabara n'uche nke ndi isi ochichi n'onwe ya. Usoro na usoro iheomume, nke Council Executive nakweere na nnọkọ nke 112 ya, yana ụbọchị na ebe a ga-enwe nnọkọ nke 113, bụ ndị odeakwụkwọ na-agbaso nke ọma ma kwadoro ya nke ọma, gụnyere nnata, mmeghe na nyochaa ngwa, usoro e mere. na mmekorita ya na onye nnọchi anya oche nke nnọkọ 113th nke Council Executive.
Na-egbu egbu site na mgbasa ozi
Ọzọkwa, UNWTO nwere ndekọ nke omume iwu malitere megide ụlọ ọrụ mgbasa ozi a họọrọ maka iji akara UNWTO na-akwadoghị na n'enweghị ikike (2017), ndekọ na-enweghị ikike na mbipụta nke nnọkọ nke Òtù Na-achị Isi nke UNWTO (2017-2018); na nkwutọ megide ndị ọrụ nke Òtù Na-adịghị ejide ọrụ ọha na eze (2019).
N'oge a, enwere m ọrụ idobe ụfọdụ ozi n'okpuru ikike iwu, iji zere imebi usoro na-aga n'ihu bidoro na 2018 megide ụfọdụ ndị debanyere aha akwụkwọ ozi ahụ yana ichekwa aha nzukọ a. Emebere usoro ndị a ka ụlọ ọrụ dịpụrụ adịpụ, KPMG mere, n'arịrịọ m mgbe m wetara ọrụ, ka m wee chọpụta ihe ngwọta nwere ike ịkpata nnukwu ụkọ ego nke nzukọ a, nke mebiri ọrụ UNWTO na ndị otu ya na imezu ya. iwu ya.
Mmekọrịta ya na UNWTO
Mkpebi nke ụfọdụ mba ndị otu na-ekwurịta okwu n'otu n'otu site n'otu mgbasa ozi dị iche iche bụ nke pụrụ iche. UNWTO bụ ọgbakọ gị, nke na-ejere ndị otu ya ozi, ma na-emeghe mgbe niile maka nkọwapụta ọ bụla nke mba ndị otu ya egosipụtara n'ụdị dabara adaba, dị ka enyere n'akwụkwọ nkwekọrịta nke UNWTO. Ọ bụ iguzosi ike n'ezi ihe nke mmadụ niile na usoro ime mkpebi site na Òtù Na-achị Isi anyị ka m na-agba ume ka a kwanyere ya ùgwù. Dịka e hiwere n'ụkpụrụ nke otu ahụ, nke mba ndị otu niile gbasoro na ya, ndị a bụ ebe kwesịrị ekwesị iji kparịta ụka ma kparịta okwu nhazi nke ndị otu niile. Nke a bụ ụkpụrụ dị mkpa iji hụ na arụ ọrụ nke akụkụ ahụ na usoro mkpebi ha yana ọdịmma na onyonyo ụlọ ọrụ nke Òtù ahụ.
N'ihe gbasara ebubo ndị na-enweghị isi, achọrọ m ịdọrọ uche gị na nkọwa ndị odeakwụkwọ nyere na mgbakwunye na akwụkwọ A / 24/5 (c) nke a na-enye maka nlebara anya site n'aka Nzukọ Ndị Isi. Ị ga-achọta ozi niile dị mkpa gbasara mbọ a na-enwetụbeghị ụdị ya kemgbe 2018 iji jiri nwayọọ nwayọọ na-ewusi nghọta na nkọwa nke Òtù ahụ ike na iji guzobe ọrụ nlekọta n'ime nke tupu 2018 ahụghị nkwado achọrọ site na njikwa gara aga.
Ezigbo ndị otu mba, biko nabata mmesi obi ike nke nlebara anya kacha elu m.
NDỤMỌDỤ UNWTO ENYERE N'ADRESS NA STATES ndị otu